🥇 ▷ Tani waxay noqon kartaa naqshaddii ugu dambeysay ee Redmi Note 8? ✅
Tani waxay noqon kartaa naqshaddii ugu dambeysay ee Redmi Note 8?
Waxaan muddo ka wada hadalnay taleefanka Xiaomi oo leh kaamiro 64 megapixel ah muddo dheer. Hagaag, haddii aan adkeyno, runtii waxay noqon doontaa taleefanka Redmi, in kastoo aan wada ogsoonahay in ulajeeddooyin la taaban karo ay lamid tahay. Maanta oo keliya 10 maalmood ka hor, waxaan kugula soo hadalnay markii ugu horreysay ee Redmi Note 8, taleefanka aan rajeynayno inuu noqon doono midka leh 64 camera megapixel. Sidoo kale, Maanta waxaan arki karnaa markii ugu horreysay nashqadeynta uu terminalkani keeni karo, Uguyaraan sidii aan rabnay inaan u muujinno astaanta lafteeda.
Sawirrada aan maanta kuu soo qaadno waxay ka tirsan yihiin fiidiyoo ay daabacday Redmi waxaanan awoodnay inaan aragno iyaga oo uga mahadcelinaya filterka Mukul Sharma. Mid ka mid ah waa abaalmarin loo abuuray ku saleysan muuqaalkan, sidaa darteed natiijada ugu dambeysa way ka duwanaan kartaa tii aan maanta kuu soo qaadno, laakiin haddii la xaqiijiyo inaan wajahayno Redmi Note 8, ugu yaraan waxay noqon doontaa taleefan la mid ah.
Redmi Note 8 ayaa la imaan doonta saddex kamaradood gadaal ah
Fiidiyowga la daabacay waxaa muujiyey Xiaomi taas oo cadeyn u ah inay mar horeba ka shaqeynayaan waxqabadka ugu badan si ay u soo saaraan taleefankoodii ugu horreeyay oo leh kamarad 64 megapixel ah (waxay u muuqdaan xitaa kuwa aad u yar marka la barbar dhigo kaamiradda 108 megapixel). Xanta ayaa soo jeedineysa in taleefanka sii deyn doono kaamiradan uu noqon doono Redmi Note 8 (xusuusnow in Redmi Note 7 horeyba ujirto 48 megapixel). Qeybaha qaarkood ee fiidiyowga, waxaad arki kartaa naqshadda loo maleynayo xarigaan, haa, gudaha, markaa ma ogin dhamaadka ugu dambeeya.
Ma jeceshahay inaad aragto taleefanno hufan? Hagaag, sawirka aad ku aragto khadadkaan ayaa umuuqda in ay la mid yihiin. Kani waa Redmi Note 8 iyada oo gadaaluna aysan lifaaqan. Gudaha, iyo waxyaabo kale, waxaan kala sooci karnaa seddexda kamaradood ee gadaal u dhaca iyo waxa umuuqda inuu yahay dareeme afraad, waxay macno samayn lahayd inay noqoto 3D ToF. Waa macquul in lagu kala soociyo jaleeco midkee saddexda dareemayaasha ah midka ugu weyn, maadaama uu leeyahay cabbir aad uga weyn kan dareemayaasha kale, oo ah mid ka mid ah danaha ugu weyn ee loo adeegsanayo dareemahan.
Intaa waxaa sii dheer, sida aan ku arki karno qaabeyntiisa, Redmi Note 8 aad ayey uga duwanaan doontaa waxa astaan ​​noogu soo bartay, ugu yaraan gadaal. Haddii aan u baahan nahay inaan nidhaahno taleefoon na yaqaan, waa Oppo Reno, sidaasgaar ahaan qaabeynta kaamerooyinka udhexeeya, In kasta oo haddii module kaameeradu ay ku biirto dhammaantood oo aysan shaqsi ahayn, waxay u ekaan doontaa sida OnePlus 7 Pro.